जापानको भन्सार | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | संस्कृति, जापान
जापान यो मेरो मनपर्ने गन्तव्य हो, म भन्न सक्दछु मेरो ठाउँमा मेरो जन्मभूमि पछाडि संसारमा। मलाई जापान मन पर्‍यो कि म विगत तीन बर्षदेखि छुट्टीमा छु। प्रायः यात्रा गर्दा मलाई यसको व्यक्तिहरूसँग बढी सम्पर्क हुन, साथीहरू बनाउन, पर्यटकका लागि गाह्रो ठाउँहरू हेर्न वा आराम गर्न र त्यहाँ मेरो समयको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ। र निस्सन्देह, यसले मलाई अझ राम्ररी जान्न पनि अनुमति दिएको छ तिनीहरूको चलन.
प्रत्येक संस्कृति एक विश्व हो र सत्य यो छ कि त्यहाँ धेरै छन् जापानी चलन कि एक पश्चिमी आँखा मा कम्तिमा विचित्र छन्। बढ्दो घामको भूमिमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? के तपाईलाई म and्गा र एनिमे मन पर्छ र के तपाई यस देश र यसका मानिसहरुसंग प्रेम गर्नुहुन्छ? त्यसोभए यो लेख तपाईका लागि हो:
जापानी समाज रमाईलो तर केहि छ। जबकि हाम्रो संसारको भाग बाट हामी एक अर्कालाई द्रुत रूपमा चिन्न सक्छौं, हामी शारीरिक सम्पर्क को अधिक, एक मित्र को घर मा गिर बिना धेरै फिर्ता र यस प्रकारको कुरा, जापानी धेरै फरक छ र सामाजिक पदानुक्रम सजिलै बिर्सिएको छैन।
जापानी भाषाको धेरै अत्यन्त नम्र संस्करणहरू छन् र तिनीहरू, विशेष गरी क्रिया सम्बन्धी प्रयोगहरू, जब वार्तालापकर्ताले हाम्रो भन्दा उच्च स्थान ओगटेको हुन्छ, बुढो हुन्छ वा सजिलै थाहा छैन। एक पर्यटक को रूप मा यी सबै जान्न कुनै बाध्यता छैन तर तपाइँको ज्ञान, यदि तपाइँ लामो समय सम्म रहनुभयो भने, सराहना गरिन्छ। लेबल केहि कडा छ संसारको बाँकी भन्दा:
व्यक्तिगत जानकारी कार्डहरू सधैं दुवै हातले आदानप्रदान हुन्छन्।
पिउने राउन्डहरु प्रत्येक समूहका सदस्यहरुका लागी एक पिईरहेको छ।
सामान्यतया, समूहमा उच्च श्रेणीका व्यक्ति बाहिरबाट बाहिर निस्केर उसको नजिक जानेहरूलाई राख्छन्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण स्थान छैन भने तपाई ढोकाको छेउमा बस्नु पर्छ।
अर्कोको पेय जहिले पनि हाम्रो सामु प्रस्तुत हुन्छ।
चाउचाउहरू ड्रामा बिना स्लिप हुन्छ। हल्ला र छप्पर? तपाईं ठिक हुनुहुन्छ।
यस्तो भनिन्छ कि कम्पाई टोस्टि ofको समयमा।
यस्तो भनिन्छ कि itadaikimasu खाना अघि हात सँगै। एक किसिमको "बोन एपिटिट"।
यस्तो भनिन्छ कि gochiso samashitaita, खाना पछि।
साधारणतया यी चलनहरू जान्दै तपाईं समस्या बिना जापानी संग पिउन बाहिर जान सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, तपाईंले उनीहरूलाई वास्तवमै धेरै पिउने कुराको बानी पर्नुपर्नेछ, मुख्यतया बियर र धेरै जसो धुम्रपान गर्नुहुन्छ। त्यहाँ बार वा रेस्टुरेन्टमा घर भित्र धूम्रपान प्रतिबन्ध छैन त्यसकारण धेरै जसो स्थानमा धुम्रपान गर्नेहरूको लागि छुट्टै क्षेत्र हुनेछ। अधिकमा, साना बारहरूमा वा इजाकायास, जसलाई उनीहरू बोलाइन्छन्, यो असम्भव छ, त्यसैले यदि तपाईं धुम्रपान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न भने ... राम्रोसँग तपाईं यस संग राख्न सक्नुहुन्छ।
La senpai-kohai सम्बन्ध यो यहाँ पनि गहिरो जराको चलन हो, यद्यपि यो कोरियामा पनि देखिन्छ। यो छ एक वयस्क व्यक्ति र एक जवान व्यक्ति बीचको सम्बन्ध तर भिन्नता अतुलनीय हुनुपर्दैन, यो दुई चार वर्ष मात्र हुन सक्छ। वृद्ध हुनु भनेको जापानमा उच्च मूल्यवान् चीज हो किनकि यसले ठ्याक्कै पदानुक्रम चिन्हित गर्दछ र हामी पहिले नै जान्दछौं जुन यती वरिपरि यति महत्वपूर्ण छ।
यो स्कूल र काममा देखा पर्दछ र जिम्मेवारीको डिग्री चिन्ह लगाउँदछ जुन एकसँग वा कार्यहरू गरियो। एक सेनपाई एक रोल मोडेल हो यसको कोहाईको लागि र यद्यपि यसको मध्यकालीन र सैन्य उत्पत्ति छ, यो अझै पनि आधुनिक जापानी नागरिक समाजमा केही कुरा हो।
यस लाइन भित्र हामी समावेश गर्न सक्दछौं माफी माग्ने बानी। यहाँ व्यक्तिले धेरै स्पष्टीकरणहरू दिदैनन् तर धनुको साथ पहिले माफी मागे जसको झुकाव हाम्रो डिग्री माफी को तीव्रता चिह्नित हुनेछ। के यो हल्का छ, जबरजस्ती गरिएको छ, यो महसुस गरिएको छ, के यो शर्मनाक छ? माफहरू अवस्थित छन् र दिईएको हुन सक्छ, किन तपाईं कामको लागि ढिलो गर्नुभयो वा काम समाप्त गर्नुभएन भन्ने कारणहरू, तर पहिले के लायक हुन्छ माफी माग्नु हो।
इनडोर चलनहरू मध्ये सब भन्दा विशिष्ट हो भुइँमा फोहोर नलिनको लागि आफ्नो जुत्ता फुकाल्नुहोस्। सँधै त्यहाँ चप्पल छन्अतिथिको लागि पनि। र त्यहाँ बाथरूमको लागि छुट्टै चप्पलहरू पनि छन्। यदि तपाईं होटेलमा जानुहुन्छ भने तपाईले जहिले पनि देख्नुहुनेछ कि जोडीहरू फरक छन्। र यदि तपाईले अपार्टमेन्ट भाँडामा लिनुभयो भने तपाईले देख्नुहुनेछ कि त्यहाँ चप्पलहरू छन् जस्तै बाहिर बाल्कनीमा जानका लागि।
एक जापानी कस्टम जुन म प्रेम गर्छु एक मा पसल कोम्बिनी वा सुविधा स्टोर (परिवार मार्ट, Lawson, 7eleven)। तिनीहरू मिनी बजारहरू देशभरि छरिएर रहेका छन्, जताततै, केहि रातभर खुला रहन्छन्, केहि थोरै बिक्री गर्दछन्: तयार खाना, आइसक्रिम, म्यागजिन, पेय, मोजा, ​​टाई, शर्ट, कैंची, प्लग, चार्जर र एक अनन्त etcetera । तिनीहरू शानदार छन्। यदि तपाईं तिनीहरूमा खाना किन्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, दिउँसो छ बजे पछि मूल्यहरू तल जान्छन्।
यदि तपाईं जापानीसँग कुराकानी गर्न पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, कहिलेकाँही तिनीहरू असामाजिक छन् तर वास्तवमा यो यो हो कि तिनीहरू मध्ये धेरैले बोल्ने भाषा बोल्ने वा उनीहरूको समस्याहरूको लागि शर्म महसुस गर्ने पर्याप्त अंग्रेजी बोल्दैनन्, तपाईंले उनीहरूलाई देख्नुहुनेछ। इशाराहरू जुन तपाईंलाई थाहा छैन। उदाहरण को लागी, केहि अस्वीकार गर्न को लागी तिनीहरु का हतियार पार, तपाइँ को लागी एक X बनाउनुहोस्। र यदि तिनीहरूले केहि ठीकको लागि दिन्छन् बरु हाम्रो क्लासिक र लोकप्रिय थम्ब अपको सट्टा तिनीहरू पुरानो मार्गमा अनुक्रमणिकाको साथ औंठामा जोडिन्छन्।
तपाईं त्यो पनि देख्नुहुनेछ जापानीहरु सबै ठाउँमा निदाउन कुनै समस्या छैनs, विशेष गरी रेल वा सबवेमा। तिनीहरू निदाउँछन्, झुम्के, तपाईंको काँधमा टाउको राख्छन्, र जीवन चलिरहन्छ। तिनीहरू कामबाट थकित छन् र कहिलेकाँही उनीहरूको कामबाट टाढा बस्छन् कि तिनीहरू मिनेटमा बाहिर जान्छन्।
Y जापान मा तपाइँको कस्ता प्रचलनहरु लाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ? खैर, यो चाखलाग्दो छ ... सार्वजनिक रूपमा तपाईको नाक फुक्दै राम्रोसँग देखिएको छैन। कहिलेकाँही यसलाई मद्दत गर्न सकिदैन तर ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले धेरै मानिसहरूलाई यो गर्नुहुन्न देख्नुहुनेछ। यो राम्रोसँग देखिएको छैन खाऊ र एकै समयमा सडकमा हिंड्नुहोस्। म एक क्यान्डी किन्छु र हिंड्दाखेरि खाउँदछु, म एक कोका कोला किन्छु र म यो पिउँछु बसको लागि प्रतिक्षा गर्दा, तर जापानमा यी चलनहरू राम्ररी देखिदैनन्।
तिनीहरू थोरै असह्य मानिन्छन्। एक आइसक्रीम ठीक छ, तर स्यान्डविच होईन। यदि तपाईं स्टोरमा केहि खरीद गर्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई घरमा वा स्टोरको वरिपरि खानुहुन्छ वा सेक्टरमा जहाँ तपाईं देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ व्यक्तिहरू पिउछन्, खाइरहेका छन् र धुम्रपान गर्छन्। तपाईं यसलाई ढोकाको नजिक पनि बनाउन सक्नुहुन्न! मँ यसो भन्छु किनकि उनीहरूले मलाई एकै भन्दा बढि बिस्तारै बाहिर सारेका छन् ...
र अन्तमा, जापान एक त्यस्तो देश हो जहाँ तपाईले टिप छोड्नुहुन्न। एउटा कम खर्च पर्यटकको लागि जुन धेरै राम्रो तरीकाले प्राप्त भयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » संस्कृति » जापान भन्सार